Ireo fiara raitra an’ny filoha lefitra Tindorin Obiang, namidy amin’izay sahy lafo indrindra, hamatsiana vola ny fampandrosoana ao Guinée équatoriale · Global Voices teny Malagasy
Raki-tsarobidy vinavinaina ho 17 tapitrisa euros
Voadika ny 10 Novambra 2019 8:12 GMT
Fantatra amin'ny fomba fiainany tia miliba, vao avy nifatraran'ny felaka ara-pitsarana sy ara-politika i Teodoro Nguema Obiang Mangue , filoha lefitra ao Guinée Equlatoriale, taorian'ny nangiazan'ny manampahefana soisa sy namarotana ho an'izay sahy lafo indrindra ny 25 tamin'ireo fiarany raitra. Ny vokatra azo tamin'io varotra io dia ho alefa hamatsiana asa fampandrosoana any amin'ny firenena iray izay ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia mitolona mba ho velona miaraka aminà vola tsy ampy iray dolara akory isanandro.
Fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Tindorin, hatry ny ela ity mpanao politika ity no nisitraka fiarovana henjana nahafahany nandositra ny fitsaràna taorian'ireo fiampangana marobe natao azy ho nanodinkodina volambahoaka. Raha ny marina, izy dia zanakalahin'ny filoha Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, izay nitantana ny firenena ho teo ambany vahohony nandritra ny 40 taona mahery.
Kanefa, taorian'ny taona maro nisitrahany ny tsimatimanota, vitan'ny fitsaràna iraisampirenana ihany ny nanomboka ireo dingana tany aminà firenena maro, araka ny tatitra 2019. navoakan'ny Human Rights Watch (HRW) fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, mpiaro ny zo maha-olona.
Manome antsipirihany momba io varotra ho an'ny sahy ambony io ny tranonkala coupsfrancs.com :
Momba ny hampiasàna ireo vola indray, ny tranonkala africanews.com no manazava ny dingana arahana:
2017, nihatery ny làlan-kizoran'i Obiang. Tao Frantsa, Oktobra 2017, voaheloka izy ho nanao famotsiambola, nahazoany sazy famonjàna 3 taona sy fandoavana vola 30 tapitrisa Euros, sazy mihantona, ary koa fangiazana manontolo ny fananany teo amin'ny tany frantsay, vinavinaina ho 150 tapitrisa euros, araka ny lazain'ny tranonkalan'ny transparency-france.org. Ny dingana fandravàna didy momba io dia hatao ny Desambra 2019.
Io taona io ihany, nosamborina izy teo am-pahatongavany tao Brezila noho ny tsy nanaovany fanambaràna mikasika ny volabe nentiny. Araka ny marihan’ilay bilaogera, Hippolyte Gourmantier, ao amin'ny confidentielafrique.com, tsy araka ny niheverany azy no nizoran'ny zavatra rehetra:
Firenena laharana fahatelo amin'ny famokarana solitany aty amin'ny faritra Afrika ambanin'i Sahara i Guinée équatoriale, manana mponina 1,2 tapitrisa. Saingy tsy misitraka io tombony ara-toekarena io ireo vahoaka ao aminy: araka ny Banky Afrikàna ho an'ny Fampandrosoana (BAD) nandritra ny vanimpotoana 2015-2018, “nidina nanakaiky ny 29% ny tena harinkarena faobe (PIB) tao Guinée Équatoriale, taorian'ireo taona efatra nisesy nisian'ny fitontonganana nateraky ny fidinan'ny vidin'ny solika sy ny tsy fisian'ny fanamaroana rantsana ny toekareny. Tamin'ny 2017, niankina be tamin'ny solika ny toekareny, ny 56% tamin'ny harinkareny faobe, 95% tamin'ny fanondranana ary 80% tamin'ny famorianketra”.
Ny kolikoly no tena olana fototra: ao anatin'ny tondro momba ny kolikoly ho an'ny taona 2019 navoakan'ny Transparency International, mitana ny laharana faha-172 amin'ireo firenena 180 notsirihana i Guinée équatoriale. Ara-teoria, ny vola miditra amin'ny tsirairay dia tokony ho 7,050 dollars amerikàna, araka ny fanadihadiana nataon'ny Banky Iraisampirenena. Kanefa ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka no miaina fahantràna lalina. Ny fahelàna velona eo am-pahaterahana, izay 57,65 taona tamin'ny 2014, dia any ambanin'ny salanisa manerana an'i Afrika , izay eo amin'ny manodidina ny 59,60 taona. Ilay senagaly mpanao gazety ara-tontolo iainana, Moctar Ficou, manaitra ao amin'ny vivafrik.com fa hoe tsy manana rano fisotro efa ho telo herinandro izao i Bata, ilay tanàna lehibe indrindra ao Guinée équatoriale.
Ny toejavatra toy izany no manazava ny antony mahatonga ireo teratany gineàna marobe handao ny fireneny. Tao anaty lahatsoratra iray nosoratan'ilay gineàna mpanohitra, Abeso Ndong Salomon, dia niampanga ny jadona tsy misy antra, ny kolikoly ary ny fitantanana ratsy ny fananambahoka, izay nanosika olona miisa 250.000 avy tao Guinée Equatoriale handositra ny fireneny:
Tanatin'izany toejavatra izany no naroso ho mpisolo an-drainy i Teodorin Obiang. Ny faran'ny Novambra 2018, efa niatrika ny filankevitry ny governemanta voalohany notarihany izy, araka ny lahatsoratr'i Rodrigue Loué navoaka tao amin'ny fr.africanews.com. Sy araka ny fanamarihan'ilay ivoariàna bilaogera, Stéphane Blankson: